ढोरपाटन, तमानखोला र बरेङका गरि ३ जना कोरोना संक्रमितको एकैदिन मृ'त्यु - ढोरपाटन पोष्ट
ढोरपाटन, तमानखोला र बरेङका गरि ३ जना कोरोना संक्रमितको एकैदिन मृ’त्यु
२०७८ जेष्ठ १४, शुक्रबार १८:१६
बागलुङमा आज एकैदिन तीन जना कोरोना संक्रमितको मृ’त्यु भएको छ ।
संक्रमण पुष्टि भई बागलुङको धौलागिरी अस्पतालमा बरेङ गाउँपालिकाका १ जना पुरुष र तमानखोला गाउँपालिकाकी एक महिला गरि दुई जनाको मृ’त्यु भएको हो । यता ढोरपाटन अस्थायी कोभिड अस्पताल बुर्तिबाङमा पनि एक जना पुरुषको मृ’त्यु भएको छ ।
धौलागिरि अस्पतालमा बरेङ गाउँपालिका वडा नं. १ का ६५ वर्षिय पुरुषको शुक्रबार दिउँसो सवा १ बजे उपचारका क्रममा मृ’त्यु भएको थियो ।
उनी बिहीबार मात्र धौलागिरि अस्पताल भर्ना भएका थिए । उनको एन्टीजेन परीक्षण गर्दा कोरोना पोजेटिभ देखिएको थियो ।
यस्तै तमानखोला गाउँपालिका वडा नं. ५ की ६७ वर्षिय महिलाको कोरोनाबाट आजै धौलागिरि अस्पतालमा मृ’त्यु भएको हो । स्वास्थ्य संस्थामा ढिलो आउने गरेका कारण संक्रमतिहरुको मृ’त्यु हुने दर बढेको जिल्ला कोभिड फोकल प्रशन देवप्रकास घिमिरले बताउनुभयो ।
ढोरपाटन नगरपालिका वडा नं. ५ का ६५ वर्षिय पुरुषको आज साँझ ५ वजे कोभिड अस्थायी अस्पताल बुर्तिबाङमा मृ’त्यु भएको छ । लक्षण सहित विरामी भई दिउँसो स्वास्थ्य केन्द्रमा आएका उनको कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएपछि एन्टिजेन्ट परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य केन्द्रका डा. मिलन मल्लले बताउनुभयो ।
रिपोर्ट पोजेटिभ आएपछि, अक्सिजन लगाइ राखेको अवस्थामा उनको साँझ ५ वजेपछि मृ’त्यु भएको डा. मल्लले बताउनुभयो । मृगौला सम्बन्धी समस्या र उच्चरत्तचाप समेतको समस्या भएका उनी घरमै रहेको र अवस्था ग’म्भीर भएपनि अस्पताल आएको उहाँले बताउनुभयो ।
कोरोना संक्रमितहरु स्वास्थ्य संस्थामा ढिला आउँदा मृ’त्यु हुनेको संख्या बढेको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बागलुङले जिल्लाका सबै वडामा तत्काल एन्टिजेन परक्षिण गर्ने योजना बनाएको छ । ‘मौषमले साथ दिएको छैन,जिल्लाभरका स्थानीय तहमा एन्टिजेन किट पुगेको छ ।’ जिल्ला कोभिड फोकल पर्सन घिमिरेल, जिल्लाभर चार हजार जनाको एन्टिजेन परीक्षण गरिने जानाकारी दिनुभयो ।
तमानखोलाकी ६७ वर्षिय महिलाको कोरोना संक्रमणका कारण मृ’त्यु
एन्टिजेन परीक्षणमा बरेङ हुग्दीसिरका ३ जना पोजेटिभ
कोभिड नियन्त्रणमा दार्मा गाउँपालिकाको प्रयास